Sudan oo lagu qasbay inay qaadato nidaamka Cilmaaniga
Home WARARKA Sudan oo lagu qasbay inay qaadato nidaamka Cilmaaniga
KHARTOUM-(Berberanees)-Dowladda Sudan iyo koox mucaarad ah oo weyn oo ka dhisan buuraha koonfureed ee Nuba ayaa Axaddii kala saxiiday dokument dhabbaha u xaadhaya heshiis kama dambeys ah, oo dhammaan dadka siinaya xorriyad caabudid, islamarkaana kala saaraya diinta iyo dowladda.
Sanadkii tagtay, Sudan ayaa heshiis la gashay kooxo badan oo ay ka mid tahay kooxda gobolka galbeed ee Darfur.
Waxa loogu yeedhay ‘Baaq Mabaadi’ida’ ayaa waxaa Axaddii caasimadda Koonfur Sudan ku saxiixday Sudan iyo kooxdan SPLM-N, taasi oo macnaheedu yahay in wada-hadallada heshiis buuxa lagu gaadhayo ay hadda billaaban karaan.
“Qofna laguma qasbayo diin, dowladduna ma lahaan doonto diin rasmi ah,” ayaa lagu yidhi qoraalka iyadoo aan la caddeyn in Sudan ay noqoneyso dal cilmaani ah iyo in kale.
Sudan waxay iminka “aqbashay inay kala saarto diinta iyo dowladda,” ayuu yidhi.
Sudan oo lagu qasbay inay qaadati nidaamka Cilmaaniga
Previous articleKomishanka oo shaaciyey xilliga Kaadh-qaadashadu Ka bilaabmeyso Gobollada Togdheer, Awdal iyo Maroodi-jeex
Next articleGuddoomiyaha Ururka Shebekadaha Somaliland oo jawaab adag ka bixiyay eedo loo jeediyay